Ciidamada ilaalada madaxweyne ku xigeenka Puntland oo xiray xarunta shirkada isgaarsiinta Golis ee Garoowe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCiidamada ilaalada madaxweyne ku xigeenka Puntland oo xiray xarunta shirkada isgaarsiinta Golis ee Garoowe
Ciidamada oo hor taagan xarunta shirkada isgaarsiinta Golis ee Garoowe. Sawirka: Puntland Mirror.
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada ilaalada madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiim Cumar Camay ayaa maanta oo Axad ah weerar ku qaaday xarunta shirkada isgaariinta Golis ee Garoowe.
Sida ay sheegayaan ilo-wareedyadu ciidamada ayaa albaabada u xiray shirkada kadib markii shirkada diiday in ay bixiso lacago sharci daro ah oo dhan ilaa iyo $30,000 oo uu madaxweynaha ku xigeenka shirkada weydiistay.
Weerarka maanta ee shirkada Golis ayaa imaanaya labo maalmood kadib markii maamuule ku xigeenkii sidoo kalena ahaa nin u dhaxeeya shirkada iyo dadweynaha ama dowlada, Cumar Ciise Maxamed “Cumar Faaruuq” uu ku dhintay shil gaari oo ka dhacay duleedka magaalada Garoowe.
Bartamihii bishii Agoosto, weerar kan lamid ah ayaa ciidamada madaxweyne ku xigeenka waxa ay ku qaadeen bangiga Amal xaruntiisa Garoowe.
Golis ayaa ah shirkada ugu weyn ee isgaarsiinta Puntland oo bixisa adeega taleefoonada.
August 17, 2016 Madaxweynaha dowlada Puntland oo u safray Itoobiya
July 16, 2016 Madaxweynaha dowlada Puntland oo Madaxweynaha Turkiga ugu hambalyeeyay inqilaabkii fashilmay
Madaxweynaha Puntland oo hadal nacasnimo ah ku tilmaamay hadal Xasan Shiikh dhawaan uu ku sheegay in Puntland ay ka koobantahay labo gobol iyo bar